Macluumaadka talaalada COVID-19 - This Is Our Shot Canada
Waa maxay sababta aan isku tallaalayo??
Iska talaalida fayraska COVID-19 waxa uu kaa caawin doonaa inuu kaa ilaaliyo inaad ku xanuunsato ama aad ku dhimato Covid-19. Sidoo kale, waxa uu joojinayaa in Covid-19 ku faafo Kanada, tiro wanaagsan oo reer Kanada ahi waa inay is talaalaan si loo joojiyo isku gudbinta fayraska ee bulshada.
Xataa haddii aanu qofku ku dhiman COVID-19, waxaa jiri kara mushkilad mudo dheer ah oo ay ku jiraan xasuusta oo guurta, daal, mushkilad neefsi oo aan la garanaynin, iyo waxyeelo sanbabka iyo wadnaha ah.
Waa maxay xayndaabka badbaadada bulshada oo maxayse muhiim u tahay?
Haddii dad badan is talaalaan, fayraska waxaa yaraanaya faafitaankiisa. Waa in aan talaalnaa ugu yaraan 75% dadka si aanu u gaadhno xayndaabka badbaadada bulshada oo aanu ugu noqona nololaheenii maalin kasta oo caadiga ahaaa, dib loo furo ganacsiyada, in aanu laabta gelinoo oo aanu mar kale aragno dadkeenii.
Ma in aniga aan iska bixinayaa kharashka talaalka COVID-19?
Maya, dhamaan talaalada COVID-19 oo dhan waa bilaash.
Ma isku dari karaa oo ma is waafajin karaa noocyada tallaallka si aan degdeg ugu qaato?
Bartamaha Juunyo, Gudida Latalinta Qaran ee Talaalka (NACI) wuxuu cusbooneysiiyay talo-bixinnadiisii sida laisugu baddalan karo tallaallada COVID-19 ee kuurooyinka labaad. Tallaalka mRNA hadda waxaa loo doorbidayaa inuu yahay kuurada labaad ee loogu tala galay shakhsiyaadka qaatay kuurada hore ee AstraZeneca, taasoo ku salaysan caddeyn soo baxeysa oo ku saabsan inuu difaaca jirku si fiican ugu shaqeyn karo tallaalka isku qasan.
Sidee ayuu waxtar u leeyahay talaalku kahortaga COVID-19?
Sida ay sheegeen Health Canada, iyo tijaabada caafimaadka oo lagu sameeyay tobanaan kun oo ka qayb gale oo la talaalay:
Pfizer-BioNTech 95% ayuu wax taraa kadib marka talaalka labaad la qaado
Moderna 94% ayuu wax taraa kadib talaalka labaad
AstraZeneca 62% ayuu wax taraa kadib talaalka labaad (79% daraasada Waqooyiga/Koonfurta Maraykanka ayaa sheegey)
Macluumaadka caalamka dhabka ah ee AZ waxa uu wax taraa 80-90% kahortaga dhigitaanka isbitaalka.
Johnson & Johnson 66% ayuu wax taraa marka mar kaliya la qaado oo macluumaadka caalamka dhabta ah waxaa weeye >90% ayuu wax taraa kahortaga xanuunka daran iyo dhigista isbitaalka.
Dhamaan afarta talaal wax badan ayay taraan marka la eego kahortaga COVID-19 daran, dhigista isbitaalka iyo dhimashada.
Miyay talaaladu wax ka taraan noocyada kala duwan ee fayraska?
Way ku kala duwan yihiin talaalada iyo noocyadu.
Talaal kasta oo COVID-19 waxa uu kahortagaa xanuunka daran/dhimashada ee noocyada kala duwan ee wakhtigan wareega Kanada.
Xataa haddii talaalku muujinayo waxtar yar oo noocyada qaar ah, shirkada soo saartay waxay wadaan noocyo cusub oo talaaladooda ah si ay wax uga taraan noocyada cusub, markaa waxay u badan tahay in aad talaal kale qaadayo mustaqbalka kaas oo la dhaqan gelin doono bilaha iyo sanadaha soo socda.
Maxay talaalada qaar COVID-19 loo baahnaa in laba jeer la qaato oo kala duwan?
Pfizer-BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca, waxaa looga baahan yahay laba talaal maadaama oo talaalka kowaad “xaliyo” difaaca jidhka jawaabtiisa: jidhkaagu waxa uu bartaa sida loo sameeyo antiboodhiga uu kula dagaalamayo COVID-19. Talaalka lobaad “kordhinta” waxaa loogu talo geley difaac adag iyo mudo dheer ah. Labada talaal ayaa loo baahan yahay si looga helo difaac jidhka oo dhamaystiran.
Talaalka Johnson & Johnson waa la tijaabiyay oo waxa uu muujiyay ilaalin dadka ah oo waxa uu bixiyaa difaac jidh talalaka kaliya.
Waa maxay farqiga u dhaxeeya talaalada COVID-19 oo sidee ayay u shaqeeyaan?
Pfizer-BioNTech iyo Moderna: talaalo mRNA.
Qayb yar oo kamid ah mRNA oo ka tirsan korodhka nafaqada COVID-19 ayaa gasha unuga oo waxa ay bartaa jidhka sida uu u sameeyo antiboodhiga lagula dagaalamayo fayraska COVID-19. Kadibna mRNA ayaa ku burburisaa saacad gudaheed, waxaanay u reebaan tilmaamaha.
Astra Zeneca iyo J&J: talaalo vector oo fayraska ah.
Talaaladani waxay isticmaalaan fayrasyo aan waxyeelo la’hayn (sida fayraska hargabka oo kale ah) oo la difiiciyay oo kadibna wax laga badalay iyada oo lagu darayo wax kamid ah borootiinka korodhay ee fayraska COVID-19. Nidaam lamid ah ayaa ka qabsooma sida talaalada sare ee mRNA, kaas oo jidhkeena ku keena inuu sameeyo antiboodhi oo ka shaqeysiiyo unugada kale ee difaaca jidhka.
Midna lama fal galo ama wax kama badalo DNA-gaaga!
Midna lama socdo fayras nool oo COVID-19 ahi.
Dhamaan waxay leeyihiin samaayn caafimaad daro kale oo isku mid ah: damqasho meesha lagaa muday, daal, xumad ama astaamo sida hargabka oo kale ah, madax xanuun, murqe xanuun/laalabatooyin xanuun.
Talaaladee COVID-19 ayaa loo ansixiyay in lagu isticmaalo Kanada?
Health Canada waxay ansixisay talaalada Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca iyo Janssen (Johnson & Johnson) ee COVID-19 in lagu isticmaalo Kanada.
Haddii aad dhawaan qaadatay talaalka COVID-19, ma saamayn kartaa natiijada shaybaadhkayga COVID-19?
Maya. Qaadashada wixii talaal ah, oo uu kamid yahay talaalka COVID-19, ma saameeyo natiijada shaybaadhka COVID-19 maadaama oo aanu la socon fayras nool.